Dheuteronomio 14 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
14 “Imi muri vanakomana vaJehovha Mwari wenyu.+ Musazvicheka-cheka+ kana kuzviveura+ pahuma dzenyu nokuda kwomunhu akafa. 2 Nokuti iwe uri rudzi rutsvene+ kuna Jehovha Mwari wako, uye Jehovha akakusarudza kuti uve rudzi rwake, pfuma chaiyo,+ pakati pemarudzi ose ari pamusoro penyika. 3 “Usadya chinhu chinosemesa chorudzi chero rupi zvarwo.+ 4 Aya ndiwo marudzi emhuka dzamungadya:+ nzombe, gwai nembudzi, 5 nondo hono nemhara nemhembwe+ nembudzi yomusango nemharapara negwai romusango nengururu; 6 mhuka dzose dzine mahwanda akaparadzana uye dzine mahwanda akatsemuka pakati, idzo mhuka dzinodzeya.+ Mungadya idzodzo. 7 Asi pane dziya dzinodzeya kana kuti dzine mahwanda akaparadzana, asina kubatana, musadya dzorudzi urwu dzinoti: ngamera+ netsuro+ nembira,+ nokuti dzinodzeya asi hadzina mahwanda akaparadzana. Hadzina kuchena kwamuri. 8 Uyewo nguruve,+ nokuti ine mahwanda akaparadzana asi haidzeyi. Haina kuchena kwamuri. Musadya nyama yadzo chero ipi zvayo, uye musabata zvitunha zvadzo.+ 9 “Pazvinhu zvose zviri mumvura mungadya zvorudzi urwu: Mungadya henyu zvinhu zvose zvine zvimbi nemakwande.+ 10 Asi musadya zvinhu zvose zvisina zvimbi nemakwande.+ Hazvina kuchena kwamuri. 11 “Mungadya henyu shiri chero ipi zvayo yakachena. 12 Asi idzi ndidzo dzamusingafaniri kudya: gondo nehungwe negora dema,+ 13 ngavi tsvuku nengavi nhema+ noruvangu maererano nemarudzi arwo; 14 nemakunguo+ ose maererano nemarudzi awo; 15 nemhou+ nezizi neshiri yomugungwa norukodzi maererano nemarudzi arwo; 16 zizi duku nezizi rine nzeve refu+ nedhadha romumvura, 17 nesekwe romuromo murefu+ negora neshambira, 18 neshuramurove neshorechena maererano nemarudzi ayo, nemhupupu nechiremwaremwa.+ 19 Zvisikwa zvose zvine mapapiro zvinofamba zvakawanda hazvina kuchena kwamuri.+ Hazvifaniri kudyiwa. 20 Mungadya henyu zvisikwa zvose zvinobhururuka zvakachena. 21 “Hamufaniri kudya chero chinhu chipi zvacho chakafa choga.+ Ungachipa hako chero mutorwa upi zvake ari mukati memagedhi ako, uye angachidya hake; kana kuti chingatengeserwa wokune imwe nyika, nokuti imi muri rudzi rutsvene kuna Jehovha Mwari wenyu. “Usabika mbudzana nomukaka waamai vayo.+ 22 “Unotofanira kupa chegumi chezvibereko zvako zvose zvembeu yako, chiya chinobva mumunda gore negore.+ 23 Unofanira kudyira chegumi chezviyo+ zvako, waini yako itsva nemafuta ako nematangwe emombe dzako neemakwai ako pamberi paJehovha Mwari wako;+ kuti udzidze kutya Jehovha Mwari wako nguva dzose.+ 24 “Zvino kana rwendo rukanyanya kukurebera,+ zvokuti hauzokwanisi kuchitakura, sezvo nzvimbo ichasarudzwa naJehovha Mwari wako kuti aise zita rake+ ipapo ichange yakanyanya kuva kure newe, (nokuti Jehovha Mwari wako achakukomborera,)+ 25 unofanira kuchiita kuti chive mari, woputira mari yacho muruoko rwako woenda kunzvimbo ichasarudzwa naJehovha Mwari wako. 26 Unofanira kutengawo nemari yacho chero zvose zvingapangwa nomweya wako,+ mombe nemakwai nembudzi newaini nedoro rinodhaka+ nechinhu chero chipi zvacho chingakumbirwa nomweya wako kwauri; uye udyire ipapo pamberi paJehovha Mwari wako, ufare,+ iwe neimba yako. 27 Uye haufaniri kusiya muRevhi ari mukati memagedhi ako,+ nokuti haana mugove kana nhaka pamwe chete newe.+ 28 “Panopera makore matatu uuye nechegumi chose chezvibereko zvako zvegore iroro,+ uzviise mukati memagedhi ako. 29 Uye muRevhi,+ nokuti haana nhaka kana mugove pamwe chete newe, nomutorwa+ nenherera nechirikadzi,+ vari mukati memagedhi ako, ngavauye, ngavadye vagute; kuti Jehovha Mwari wako akukomborere+ mumabasa ose+ oruoko rwako auchaita.